UGAAR AH DUMARKA: Haddii Ninka Uu Leeyahay Afartaan Sifood Waa Ma Shaqeyste Aanan Hammi Lahayn Ee Ka Fogoow - Aayaha
Aayaha editorOctober 19, 2018
Afar sifo oo tilmaameysa in ninkaaga uusan hammi lahayn isla markaana uu yahay jiifaaye.
Waa shaqo la’aan
Shaqo la’aantu dhib malahan; dhibka ayaa waxa uu yahay in aad ahaatid shaqo la’aan balse aadan isku dayin inaad shaqo raadsatid, ninka aanan hammiga lahayn meelaha ayuu fariistaa waxana ma qabsado isagoo rajeeya in fadhigiisa uu nasiibka ugu yimaado ama shaqo nasiib ah ugu timaado intii uu aadi lahaa banaanka naftiisana uu caawin lahaa, taasi ma ahan si uu udhaqmo nin rag ah oo hammi badan dunida kaleh, wuu baxaa wax inuu qabto ayuu isku dayaa ama shaqo ayuu raadsadaa si uu ugaaro riyooyinkiisa.
Wuuku ciyaaraa kista uu helo
Qofka aanan hammiga lahayn ma garanaayo faa’idada ay leedahay inaad wax keydsatid, sababtoo ah haddii aan si daacad ah u hadalno waxba ma keedsao waxa uu daneeyaa inuu iibsado waxyaabo qaali ah si dadka uu ugu soo jiito, yaa naftiisa ka fekeraa marka.
Waa maan gaab
Ma heysto shaqo ama ilo dhaqaale oo naftiisa uu ku maareeyo, walina wuxuu rabaa inu naag wanaagsan uu helo isagoo ma shaqeyste ah uu guursado, sideey macquul ku tahay taas? Fursadaha ayaa waxa wali yihiin inuu la noolyahay qoyskiisa xittaa uusan quudin Karin naftiisa marka side u daryeeli kartaa dad kale? Nin hadaf leh oo xaaladaas ku sugan wuu illoobi lahaa inuu naag guursado ama xaas uu yeesho isagoo diiradda saaraya inuu naftiisa meeleeyo marka hore, kahor inta uusan dad kale kusoo darin.
Aad ayuu u wahsi badanyahay
Dhammaanteen waan leenahay dabeecadda wahsiga, balse aad ayay u xuntahay markay xadka ka baxdo, qorshe mustaqbal ma yeelan kartid dib ayaana u soconee halkaad hore ka aadi lahayd hadaad tahay caajisloow, haddii ninkaaga uu caajis badanyahay gaari qaldan ayaa saantahay waxaadna u baahantahay inaad ka tagtid.
Sida uu nin wanaagsan hore u sheegay , “Mustaqbalka waxaa leh kuwa maanta qorsheeya,” Sanadahaaga ha iskaga lumin qof aanan lahayn qorshe iyo mustaqbal midna oo tiisii gabay.
5 Waxyaabood Oo Lamaanahaagu Kaa Rabo Inaad U Sameyso